नेपाली सेनालाई नियम -कानुन लाग्दैन ? – Complete Nepali News Portal
नेपाली सेनालाई नियम -कानुन लाग्दैन ?
April 16, 2017	13,454 Views
कुनै पनि घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घरमा धारा, पानी, बिजुलीलगायतका कुनैपनि सामाग्री जोड्न पाइदैन। यतिसम्म कि बैंकिङसम्बन्धी कुनै काम गर्नुपरे निर्माण सम्पन्न भएको देखाउनैपर्छ। आजको नेपाल समाचारपत्र समाचार छ – तर, कतियप सरकारी कार्यालयले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिईकनै मनोमानी रुपमा घर निर्माण गरिरहेका छन्।
सबैभन्दा बढी कानुन उल्लंघन गर्ने संस्थाको रुपमा नेपाली सेना देखिएको छ। नेपाली सेनाले महांकाल अगाडि निर्माण गरेको बहुउद्येश्यीय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सोधेको समेत छैन । नक्सा पास गर्न स्वीकृति पनि लिएको छैन ।
प्रकाशित मिति :बैशाख ३ आइतबार-२०७४